Home TOROHEVITRA FOTSORATRA TSY MISY MPANJAKA Mpilalao Football English Fikayo Tomori Childhood Tantara miampy Untold Biography Facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny lalao baolina kitra iray fantatra amin'ny anarana hoe "fik". Ny Fikarahanay momba an'i Child Fikayo Tomori momba ny fahazazana plus Untold Biography Facts dia mitondra anao ny tantara feno momba ny zava-nitranga lehibe hatramin'ny fahazazany hatramin'izao.
Fikayo Tomori Childhood Tantara- Ny famakafakana hatramin'ny daty. Ny trosa amin'ny IG
Eny, ny olona rehetra dia mahita azy toy izany olona tsy miova izany ary iza no manao fahadisoana? Frank Lampard dia faly. Na dia izany aza, vitsy monja no mihevitra ny biolojia Fikayo Tomori izay tena mahaliana. Izao raha tsy mila ado intsony, andao hanomboka.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Fiainana tany am-piandohana sy fianakaviana
Manomboka, ny anarany feno dia Oluwafikayomi Oluwadamilola Fikayo Tomori. Tomori, araka ny niantsoana azy matetika, dia teraka tamin'ny andro faha-19 tamin'ny volana Desambra 1997 tao Calgary, Canada. Ity ambany ity ny sarin'i Fik kely kely sy ny reniny mahafinaritra fony vao zazakely. Araka ny filazan'ny mpankafy Chelsea iray, be loatra ny sary Nizeriana.
Nentin'i Fikayo Tomori ny zanany izay tonga i Fik. Ny trosa amin'ny IG
Fikayo Tomori dia teraka tamin'ny taona voalohany ary lahitokana ho an'ny ray aman-dreniny mahafinaritra sy Andriamatoa Oluwadamilola Tomori izay niaviany avy tany Osogbo, fanjakana Osun, atsimo andrefan'i Nizeria. Talohan'ny nahaterahany, ny ray aman-drenin'i Tomori dia nipetraka tany Lagos, Nigeria talohan'ny nifindrany tany Canada izay nisy azy. Samy tsy ao anatin'ny 40 tara ny ray aman-dreny roa amin'ny fotoana nanoratana.
I Fikayo Tomori dia niara-niresaka tamin'ny ray aman-dreniny.
Fotoam-pianakaviana: Fikayo Tomori dia avy amina fianakavianà fianankaviana ambony, izay mifamatotra fa tsy amin'ny baolina kitra ihany ny hareny fa ho an'ny fianakaviany lava izay manana ny fanjakany ara-politika matanjaka ao atsimo andrefan'i Nizeria ny mpikambana ao aminy. Fantatrao ve?… mpikambana iray ao amin'ny Tomori izay manana trano lava; Otunba (Ramatoa) Grace Titilayo Laoye-Tomori, MPA, BA, PGDE no governemantan'ny governemantan'ny fanjakan'i Osun, any Nizeria.
Ilay Tiako manankarena an'i Fikayo Tomori - Otunba Grace Titi Laoye Tomori. Ny trosa amin'i OliveBranch
Miverina amin'ny fiainany voalohany !. Rehefa avy nandany fito taona tany Canada ny ray aman-drenin'i Fikayo Tomori dia nahatsapa ny tokony hananana kolontsaina vaovao sy fanovana tontolo. Nifindra niaraka tamin'ny zanany lahy avy tany Calgary ho any London, United Kingdom ny ray aman-dreniny.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Fanabeazana sy fanabeazana
Fony tany Londres tamin'ny taona 2004, i Fikayo Tomori dia nanatrika sekoly iray izay nanolotra azy hanana fahafahana hilalao baolina mifaninana mandritra ny fotoam-panatanjahantena. Izany dia nahatonga ny fahalianany haka karama.
Ny taona 2004 dia nahita Chelsea FC niverina tamin'ny fanjakany koa nanjaka tamin'ny baolina kitra anglisy The Special One izay nankasitraka ny Afrikana toa an'i Didier Drogba. Ny ankohonany rehetra dia nanohana ny klioba ary I Tomori tenany dia nanana ny drafiny manokana. Nanapa-kevitra izy fa te ho lasa mpikambana ao amin'ny oniversite club ao London.
Ho azy, ny fomba mahomby indrindra amin'ny fahazoana scout amin'ny fitsarana any amin'ny Chelsea FC Academy dia ny miditra ao amin'ny Chelsea Soccer School. Raha tany izy ireo, dia nifidy azy teo amin'ireo mpilalao tanora ny mpanamory ary nasaina hiatrika fitsarana any amin'ny foibe fampandrosoana an'ny Chelsea FC izy ireo.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Ny fiainam-piarahamonina tany am-piandohana
Fikayo Tomori Nikambana ao amin'ny Akademia Chelsea FC tamin'ny taona 2001 dia zaza fito taona. Rehefa niditra izy dia napetraka tao amin'ny ambaratonga ambany 8 tao amin'ny klioba. Tomori dia namonjy tamim-pahombiazana ny diany tamin'ny fametrahana ny tanora tanora an'i Chelsea, izay nandroso haingana teo amin'ny laharam-pahamehana nandritry ny asany.
Fantatrao ve?… Fikayo Tomori nandritra ny fahazazany niaraka tamin'ny Akademia Chelsea dia nanomboka nifanerasera tamin'ny mpilalao mpiara-mianatra taminy, Tammy Abraham izay tonga namany akaiky indrindra. Ity ambany ity ny sarin'ny namana roa nandritra ny fahazazany niaraka tamin'ny oniversite Chelsea FC.
Fikayo Tomori Fiainana Karakarao tany am-boalohany. Credit any bpi sy IG
Rahoviana no misidina!. Nivoatra ny fisakaizan'izy ireo nandritra ny taona nahaveloman'izy ireo izay hita taratra ao amin'ny laharam-bolonany. Samy nanatanteraka ny nofinofin'izy ireo izy ireo hahatratra ny fara tampon'ny asany, ny ekipa zokiolona. Azo oharina amin'ny an'ny olona ny fisakaizan'izy ireo Mason Mount ary Declan Rice.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Road to Fame Story
Ny taona 2015 sy 2016 no lasa fiovana eo amin'ny sehatry ny tanora Tomori. Nanampy ny ekipan'ny tanora any Chelsea izy tamin'ny firaketana ireo fandresena niverina ho an'ny Lova Tanora UEFA sy ny FA Cup Cup. Mba hampisehoana fa tsara izy, dia nahatratra tamin'ny lalao famaranana i Tomori ary nomena anarana hoe mpilalao akademia 2016 Chelsea FC tamin'ny taona.
Ny tantaran'ny fahatanoran'ny Tomori dia tsy nifarana teo raha nitohy ny fahombiazana. Tao amin'ny 2017, nanampy ny ekipany anglisy U20 Angletera izy tamin'ny fandresena ny amboara FIFA U-20 World Cup tamin'ny voalohany teo amin'ny tantarany tamin'ny hetsika iray izay nitranga tany Korea Atsimo.
Fikayo Tomori Road ho Fame Tantara
Ary indray, nisy fahombiazan'ny tanora hafa nanaraka ny taona manaraka 2018. Tamin'ity indray mitoraka ity, dia nanampy ny ekipany Angletera U21 izy mba hahazo ilay Toulon Tournament. Na eo aza izany zava-bita rehetra izany dia mbola natahotra ny fisainan'i Tomori ihany ry zareo. Ankehitriny lazao aminao ny antony.
Nahoana no matahotra ?: Voarakitra tsara fa tian'i Chelsea FC ny rafi-trosa ho an'ny mari-pahaizana diplaoma, ary tsy sahy milalao azy ireo amin'ny ekipa voalohany. Ity no antony mahatonga ny tahotra hahatsapa ny sain'ny kintana rehetra ao amin'ny akademia amin'izao fotoana izao ho raisina ho masaka ho an'ny ekipa voalohany.
Amin'ny maha-mpilalao diplaoma diplaoma azy, dia natahotra azy ny tahotra nataon'i Tomori. Niaraka tamin'ilay namany akaiky Tammy Abraham izy dia tsy ampy ny lalao. Nalefa tany amin'ny klioba hafa izy ireo mba hahazoany traikefa. Tomori dia lasa mpikambana vaovao amin'ny tafika mpampindram-bola ao amin'ny Chelsea FC na dia iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny taona fianarany.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Mitsangàna amin'ny tantara
Tamin'ny fiezahana hahazoana fotoana sy zava-niainana, Tomori dia nahazo tamin'ny Loan Frank Lampard izay tamin'izay dia teo am-panaovana asa fitoriana ny tafika mpampindram-bola any Chelsea taorian'ny fanendrena azy ho lehiben'ny Derby County. Nahazo an'i Tomori i Lampard tamin'ny fahazoana antoka.
Nahazo fiatoana teo amin'ny ekipa voalohany Derby County i Fikayo Tomori. Nandona ny tany nihazakazaka izy raha vantany vao tonga tao amin'ny Pride Park, nanampy azy ireo hahatratra ny lalao famaranana tamin'ny fiadiana ny amboara.
Fantatrao ve?… Ny vanim-potoana niainan'i Tomori dia tsy fantatra ny fahatongavan'izy ireo. Nomena anarana izy Mpilalao ny taona Derby tamin'ny faran'ny vanim-potoana voalohany niaraka tamin'ny fikambanana. Izany dia nahazo azy firaketana club iray ho lasa mpilalao voalohany fampindramam-bola nahazo an'io loka io. Nahita izany teo ambany fitarihan'ny Chelsea FC Legend, Frank Lampard.
Fikayo Tomori miaraka amin'i Frank Lampard nandritra ny diany Derby. Ny trosa amin'ny IG
Ny fifandraisana misy eo amin'ny Lampard ary tsy nijanona tao i Tomori. Samy niara-nivory tao amin'ny Stamford Bridge ny mpilalao sy ny mpitantana taorian'ny fotoanany tao Derby. Nitranga izany taorian'ny nisolo an'i Lampard Sarri ho an'ny asa Chelsea.
Raha tsaraina amin'ny vanim-potoanan'ny 2019 / 2020 dia mazava fa mitazona an'i Tomori ny Lampard. Fotoana iray monja izao talohan'ny nahatongavan'i Tomori ho mpanohana sy ivon'ny foibe ho an'ny klioba London. Ny nofinofiny efa tapaka dia napetraka hotanterahina ary ny ambiny, araka ny nambarany, dia tantara ankehitriny.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Relationship Life
Noho ny fiakaran'ny lazany dia azo antoka fa ny ankamaroan'ny mpankafy klioba dia nanontany momba ny momba ny sakaizan'i Fikayo Tomori. Eny! Tsy azo lavina ny zava-misy fa ny endriny matotra manao akanjo miaraka amin'ny fomba fanaony dia tsy hahatonga azy ho voaloboka mahavariana ho an'ny vehivavy.
Ireo mpankafy klioba vao haingana dia nanontany… .Aiza no sakaizan'ny Fikayo Tomori ?. Ny trosa amin'ny IG
Miorina amin'ny fampahalalana misy ao amin'ny media sosialy Tomori, hita fa aleony mifantoka amin'ny asany (toy ny tamin'ny fotoana nanoratana). Ity zava-misy ity dia manasarotra anay ny manangona vaovao rehetra momba ny fiainany momba ny fifandraisany na ny tantarany.
indray, Fantatr'i Fikayo Tomori fa ny mpankafy sy ny mpitantana an'i Chelsea dia afaka mamela heloka bevava amin'ireo tanora tsy ho ela izay tsy afaka hampiavaka, iray amin'ireo antony nahatonga ny klioba hanana bataly amina mpilalao mpampindram-bola. Noho izany, azo atao ihany koa ny manana sipa iray i Tomori saingy mandà ny hanao ny fifandraisana amin'ny besinimaro, farafaharatsiny ho an'ny ankehitriny.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Fiainana manokana
Ny hahafantaranao an'i Fikayo Tomori Fiainana manokana amin'ny lavitra ny asany amin'ny baolina kitra dia hanampy anao hanana fomba fijery tsara sy feno momba ny toetrany tsy mendrika.
Manomboka amin'ny voalohany, Fikayo Tomori dia olona iray tsy miala amin'ny asa aman-draharaha, manandrana mandany fotoana irery ary miala amin'ny zava-drehetra amin'ny fikatsahana ny tena dikan'ny fiainana. Afaka manova ny eritreriny ho hetsika mivaingana i Tomori, izay napetrany eo amin'ny sehatry ny filalaovana.
Fikayo Tomori Life Life Facts. Ny trosa amin'ny IG
Amin'ny fomba fijerin'ny filozofika, Tomori mandritra ny fotoana tsy fiasana dia te hifandray amin'ny izao tontolo izao amin'ny fanaovana ezaka hanandrana azy araka izay azo atao.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Fiainana ao amin'ny fianakaviana
Rehefa ao amin'ny fianakaviana dia notokanan'i Fikayo Tomori ary vonona hanao izay azo atao araka izay azo atao amin'ny olombelona mba hampifaly ny dadany, ny reniny ary ny rahavaviny mahafatifaty. Ny fiainany avy eo araka ny hita eo ambany fianakaviana dia miaina fiainana sambatra any Londres noho ny fahombiazan'ny tenany.
Tomori dia hiaraka amin'ny fianakaviany akaiky. Ny trosa amin'ny IG
Ny fianakaviany rehetra dia mirehareha amin'ny fakany Nizeriana voalohany ary tsy menatra ny haneho izany akory. Hita izany satria samy maniry ny hilalao amin'ny ekipam-pirenena Nizeriana i Dada sy Neny ary ny rahavavin'izy ireo. Na dia miaina fiainana ambany aza ny renin'i Fikayo Tomori sy ny rahavaviny, ny dadany dia miditra mivantana amin'ny fivoaran'ny zanany.
Ny Fanentanana hijery ny Zanany: Fantatrao ve?… Nandritra ny tany Derby County, Tomori dia nanampy ny ekipany handresy an'i Manchester United tamin'ny fanafoanana goavana tamin'ny lalao Carabao tamin'ny alàlan'ny fifampitifirana. Tsy nisy olona nahafaly azy kokoa noho ny dadany izay nitsambikina avy hatrany tamim-pifaliana noho ny fandresen'ny zanany lahy. Zahao ny video eto ambany.
Tomori taorian'ny lalao dia namoaka ny lahatsary tamin'ny haino aman-jery sosialy an'ny dadany nitsambikina sy nandihy nanerana ny efitranon'ny fianakaviana iray.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Lifestyle
Tomori toy ny tamin'ny fotoana nanoratana dia manana tsenan'ny vidin'ny 7 tapitrisa kilao izay te hampitombo. Ny fananana lanja be dia be izany dia tsy azo adika amin'ny fomba fiaina mamirapiratra, izay mora voamarika amin'ny alàlan'ny fiaran-tsoavaly vitsivitsy, tranom-bahalazy ary onja be.
Ho an'i Tomori dia misy vola ampy foana hananana fiainana mahazatra. Avereno indray, mba hampahafantarana anao, ny fahombiazany ara-bola dia tsy mifamatotra mivantana amin'ny zava-bitany amin'ny maha mpilalao baolina ny mpitsara iray fa avy amin'ny fianakaviana manankarena izy.
Fikayo Tomori Zaza Zazakely Miampy Untold Biography Facts - Untold Facts
1997, ny taona Tomori dia teraka dia mampiseho ny famoahana ilay sarimihetsika Drama / Disaster mitondra ny lohateny hoe "Titanic" izay mbola mijanona ho iray amin'ireo tantara mahavariana indrindra amin'ny tantara.
1997 no taona navoakan'i Titanic.
Tamin'io taona io ny 1997 dia nanamarika ny fahafatesan'ny andriambavy vahoaka izay nantsoina an'izao tontolo izao ho "Dinast Di". Ny andiany Princess Diana izay sary eto ambany dia maty tany Paris, tao anaty lozam-piarakodia raha narahin'ny paparazzi.
Andriambavy Diana Maty tamin'ny taona 1997. Ny trosa amin'ny Daily Express
Haja sy loka: Tomori dia iray amin'ireo mpilalao baolina kitra tanora izay nanana ny fahaizany ny ekipa rehetra nilalao azy, nanangona trofiara sy fanomezam-boninahitra manokana arak'izay voalaza tao ambany tamin'ny fotoana nanoratana.
Fikayo Tomori Rakitsoratra sy fanomezam-boninahitra amin'ny famintinana. Ny trosa Ny masoandro
MIEZAHA HAHAY: Misaotra noho ny namaky ny tantarantsika Fikayo Tomori Childhood ary Untold Biography Facts. amin'ny LifeBogger, Miezaka izahay mba hanana ny marina sy ny rariny. Raha mahita zavatra izay tsy mety, dia zarao aminay ny fanehoan-kevitra eto ambany. Hanome voninahitra sy hanaja ny hevitrao foana izahay.
Michael Carrick Tatitra momba ny tantaram-pitiavam-bavam-bolo mbola tsy fantatra